Ikarikuni - ALinks
Iindawo eziza kutyelelwa eTurkey
January 15, 2022 IShubham Sharma izinto zokwenza, ikarikuni
Iindawo eziphambili zokuTyelela eTurkey yiIstanbul, e-Efese, eBodrum naseCappadocia. I-Turkey yenye yezona ndawo zintle zokubona indawo. Inomxholo wembali yakudala ngobugcisa obuhle. Nalu uluhlu lweendawo ezi-4 eziphezulu
Ungahamba njani eTurkey? Ezothutho eTurkey
January 11, 2022 IShubham Sharma hamba, ikarikuni
Abemi baseTurkey abaze babonakale bengenazo iindlela zothutho lomhlaba omkhulu njengeTurkey, ukusuka kwincam yaseGrisi ukuya eSyria, ukusuka eBulgaria ukuya eIran naseIraq ukuya eGeorgia naseArmenia. Ewe, uluhlu lwayo
Ungayifumana njani i-visa yaseTurkey kubemi basePakistan?
January 9, 2022 UKaruna Chandna Abantu basePakistan, ikarikuni, ivisa
Abantu basePakistan bafuna i-visa ukuze bangene eTurkey. Kuya kufuneka ufake isicelo sevisa kwindlu yozakuzo yakho ekufutshane. Ungaqala isicelo sakho kwiphepha laphambi kokufaka isicelo kunye nokuchongwa kweNkqubo yeRiphabhlikhi yaseTurkey yeNkqubo yoBumeli. Ukuba unayo
Iindleko zokuhlala eTurkey
January 4, 2022 IShubham Sharma imali, ikarikuni
Masithi uceba ukuhlala eTurkey, ke kuya kufuneka ulazi ixabiso lexabiso. Iindleko zokuphila eTurkey zingama-56.23% ezantsi kunase-US (idatha ehlanganisiweyo yazo zonke iidolophu, irente ayithathelwa ngqalelo). Vula
Uyivula njani iakhawunti yebhanki eTurkey? Iibhanki ezigqwesileyo eTurkey
Kuqoqosho oluguquguqukayo lwaseTurkey, ishishini lebhanki liyinkalo ebalulekileyo yenkqubo yezemali. Iibhanki zijongana noninzi lwemali kunye neentengiselwano zentengiso yemalike kunye nomsebenzi. Uninzi lweebhanki zikarhulumente zasekwa ukuxhasa ishishini elithile, elifana nezolimo
Ufumana njani umsebenzi eTurkey? Isikhokelo esikhawulezayo sabaphambukeli nabantu baseTurkey
January 3, 2022 UMaitri Jha imisebenzi, ikarikuni
Ukuba sele unayo imvume yokusebenza, okanye ungowaseTurkey okanye ungowaseCyprus, unokufumana umsebenzi eTurkey. Ukuba awunayo imvume yokusebenza, into yokuqala ekufuneka uyenzile kukufumana iphepha-mvume lokusebenza
Uyifumana njani iVisa yaseTurkey? Isikhokelo esikhawulezayo kwishishini nakwezokundwendwela eTurkey
Novemba 24, 2021 UKaruna Chandna ikarikuni, ivisa
Ukufumana i-visa yokuhlala mfutshane eTurkey, kukhenketho okanye kwishishini, kulula kakhulu kuninzi lweepasipoti emhlabeni. Uya kuba nekhetho elinye okanye ezimbini okanye ngezantsi apha kuxhomekeke kwipaspoti yakho kunye
Injani inkqubo yemfundo eTurkey?
Novemba 22, 2021 IShubham Sharma isikolo, isifundo, ikarikuni
ITurkey lilizwe elikuwo omabini amazwekazi aseAsia naseYurophu. Inxalenye enkulu yelizwe ikwiNtshona yeAsia kusingasiqithi weAnatolian. Umgangatho wokuphila eTurkey ulungile, ke ukuba uyacwangcisa
Zeziphi iiyunivesithi eziphambili eTurkey? Isikhokelo esikhawulezayo kumntu wonke
Novemba 21, 2021 IShubham Sharma isifundo, ikarikuni
Iidyunivesiti zaseTurkey zibekwe ngokwamanani ngokusekwe kwizikhundla zazo kwezona migangatho ziGqwesileyo kwiiDyunivesithi zeHlabathi. Izikolo ziye zavavanywa ngokusekelwe kwindlela eziqhuba ngayo uphando kunye namanqaku azo ngamalungu oluntu lwezemfundo kummandla nakwiindawo ezingqongileyo.
Ungayifumana njani i-visa yaseTurkey evela eCanada? Isikhokelo esikhawulezayo
Oktobha 25, 2021 UKaruna Chandna ikarikuni, ivisa
I-Visa yaseTurkey yabemi baseCanada iTurkey luqoqosho lwe-17th ngobukhulu kwihlabathi liphela, kwaye ngobulumko babemi lilizwe lesithathu ngobukhulu eYurophu. Ilizwe libonelela ngothotho lwemisebenzi eya kubakhenkethi abanomdla kwaye lisebenza njengepaseji
1 2 3 I zithuba ezilandelayo»